MW CMC, Mashaariicihii Mula iyo Maanta - Cakaara News
MW CMC, Mashaariicihii Mula iyo Maanta
Mula(CN) Axad, 13kii December 2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hogaaminaya wafti balaadhan ayaa saaka u ambabaxay dhanka qabalaha mula ee degmada qabribayax.
Madaxwaynaha iyo waftiga ayaa intay socdaalkan kujireen sii maray tuulooyin ay kamid yihiin: wayla-wada, dhandhiga, salbone, duldanbasle iyo qooraan.
Hadaba madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa tuulo kasta u istaagayay shacabkii sida wayn ugu soo dhawaynayay ee caleemaha qoyan lataagnaa wadooyinka isagoo madaxwaynuhu kulahadlayay shacabka goob kasta kadibna xaaladooda kawaraysanayay.
Intii socdaalkan lagu jiray ayuu madaxwaynuhu dadka danyarta ah, dadka laxaadka la’ iyo dadka wadooyinka cidlada ah kaga hor imanayayba u qaybinayay biyo, sonkor, timir, bariis iyo buskud iyadoo mashaariicda biyo-xidheenada kasocday qabaleeyada qaarna lasii kormeerayay.
Wax lasii baqoolaba, waxaa xili duhurkii ah lagaadhay santarka mula ee hoos yimaada degmada qabribayax halkaas oo shacabka qabaluhu si wayn ugu soo dhaweeyay madaxwaynaha iyo waftiguu hogaaminayay.
Madaxwaynaha ayaana ugu horayn xadhiga kajaray dhismaha xarun caafimaad oo bil kahor ladhamaystiray.
Nasasho qado ah kadibna, wuxuu isla mula madaxwaynuhu xadhiga kajaray dhismayaasha dugsi hoose-dhexe, hool shirar iyo waliba bakhaar laga dhisay qabalaha. Kadibna ceel riig ah oo laga qoday goob 2 kilo mitir u jirta qabalahaasi. Waana taariikhda markii 1, aad ee ceel laga qodo mula.
Madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaana kulan balaadhan laqaatay bulshada qabalaha mula amin kubeegan maqribkii. Kulankan ayuuna madaxwaynuhu uga waramay bulshada mula sooyaalkii deegaanka, iyo isbadalada horumarineed, nabadgelyo iyo kuwa siyaasadeed ee wakhtiga yar gudihii lagu gaadhay oo ay kamid tahay mashaariicahan waa wayn ee laga hirgaliyay mula maantana xadhiga laga jaray. Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kubooriyay shacabka qabalaha inay ilaashadaan mashaariicahan iyo inay ujeedsadaan dhanka waxsoosaarka beeraha, kaqaybqaadashada waxbarashada iyo kaalmaha kale ee kaga aadan horumarka maadaama aysan maanta jirin nabadgelyo daro lagu mashquulo.
Shacabka mula oo iyana dhankooda kahadlay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaanshaha madaxwaynaha iyo waftigiisa ayna si diiran usoo dhawaynayaan. Waxayna kamarkhaati kaceen waxqabadka muuqda ee qabalaha mula maanta kajira iyo siduu awal hore ahaan jiray oo kaaf iyo kaladheeri ah.
Ugudanbayna, madaxwaynaha iyo waftiguu hogaaminayay ayaa xili habeenimo ah kusoo laabtay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga.